Cusboonaysiinta Coronavirus: Bixinta waxay sii socon kartaa inta lagu jiro amarka joogitaanka-guriga - Cunnooyinka wheels
Cusboonaysiinta Coronavirus: Gaarsiinta waa la sii wadi karaa inta lagu jiro amarka guriga-guriga
La cusboonaysiiyay 3/25/20: Barnaamijyada Cunnada ee Wheels ee magaalooyinka Mataanaha ah waa adeeg sii socda iyadoo lala soconayo xaaladda soo kordhaysa ee Coronavirus / COVID-19 ee Minnesota. MUHIIM: Cunnooyinka Wheels tabaruceyaasha ayaa sii wadi kara inay keenaan alaabada inta lagu jiro amarka “joogitaanka guriga” ee Badhasaabka Minnesota Tim Walz. Tabaruceyaasha cuntada ee 'Wheels on Wheels' waxay bixiyaan adeeg muhiim ah umana baahna wax dukumiinti ah si ay awood ugu yeeshaan inay keenaan alaabooyinkooda caadiga ah
Waxaan qaadaneynaa talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka bulshada si aan si firfircoon u xasuusino dadka aan u adeegno, tabaruceyaasheena iyo shaqaalaheena talaabooyinka maalinlaha ah ee ay qaadi karaan si looga hortago faafida cudurka.
"Meals on Wheels waxaa ka go'an caafimaadka iyo badbaadada shakhsiyaadka aan u adeegno iyo mutadawiciinta ay ku qaadato in cunno la keeno," ayuu yiri Metro Meals on Wheels oo ah Agaasimaha Fulinta Patrick Rowan. "Marka lagu daro dhaqamadeena maalinlaha ah ee la tacaalida cuntada aaminka ah, waxaan shaqeeynay dhowr talaabo oo firfircoon si aan u ilaalino qof walba oo ku lug leh diyaarinta iyo gaarsiinta cuntada iyo yareynta faafida cudurka."
Hadaad tabaruc tahay ..
Waxaan codsaneynaa in tabaruceyaasha Meals on Wheels ay qaadaan tillaabooyinka soo socda si ay naftooda iyo kuwa kaleba uga badbaadaan cudur kasta, oo ay ku jiraan coronavirus:
Guriga la joog hadaadan fiicnayn. Wac iskuduwaha boggaaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay u helaan bedelkiisa.
Dhaq gacmahaaga ka hor intaadan cuntada geyn.
Ku dabool qufacaaga adigoo ku qufacaya xusulkaaga. Haddii aad isticmaali karto waraaq, ka dibna ku tuur qashinka.
Joog guriga ugu yaraan 24 saacadood ka dib qandho xummad.
Tilmaamo dheeraad ah waxaa bixin doona iskuduwaha goobtaada. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaan ubaahanahay tabaruceyaal badan haddiiba uu dillaaco muddo dheer. Haddii aad tahay mutadawiciin cusub ama hadda, waad iska qori kartaa si aad u noqoto tabaruce wicitaan halkan haddii ay dhacdo waxaan la kulannaa yaraansho waxaana u baahan nahay mutadawiciin caafimaad qaba.
Halkan ka eeg FAQ buuxa ee mutadawiciinta halkan.
Hadaad tahay cuno qaataha Cunnada Whe
Talooyinka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxaa ilaaliya barnaamijyada deriska waxaanan ku dhiirrigelinaynaa dhammaan mutadawiciinta inay guriga iska joogaan haddii ay muujinayaan astaamo la mid ah xasaasiyadda hargabka ama xilliyeed. Waxaan dhaqan galineynaa sharciyo adag oo gacmo dhaqashada ah markii aan imid goobta cunada lagu bixiyo ee shaqaalaha, shaqaaluhuna waxay si buuxda u nadiifinayaan dhamaan waxyaabihii loo adeegsaday dariiqa gudbinta, oo ay ku jiraan boorsooyinka cunnada la keeno.
Haddii aad wax su'aalo ama walaac ah qabtid, ama haddii aad jeclaan lahayd inaad wax ka beddesho tilmaamahaaga bixinta, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad la xiriirto barnaamijka Cuntada ee Daba-galka deegaankaaga. Haddii aadan qof kula xiriiri karin barnaamijka xaafaddaada, fadlan la xiriir Metro Meals on Wheels oo ah 612-623-3363.
Meals on Wheels waxaa ka go'an inay bixiso gaarsiinta cuntada oo dhan Coronavirus / COVID-19 Faafida. Waxaa jiri kara xoogaa isbeddelo ah oo lagu bixiyo adeegyada la bixiyo xilligan adag si loo ilaaliyo badbaadada dadka cuntada qaata iyo mutadawiciinta, laakiin waxaan sii wadi doonnaa inaan u adeegno deriskeenna u baahan.
Sharaf bay noo tahay inaad u dooratay Cunto on Wheels sidii bixiyahaaga cuntada ee guriga laguugu keenayo. Waan sii wadi doonnaa inaan kormeerno xaaladdan oo aan kula socodsiin doonno, gaar ahaan haddii aan filayno inay suurtagal tahay in adeeggu uu hakad galo noocuu doono ha noqdee. Fadlan aqri su'aalahan la isweydiiyo ee FAQ si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aan sameyneyno si aan u ilaalino kuwa cuntada hela marka aan sameyneyno alaabada.
Hadaad jeceshahay inaad iskaqorto Cunnada Wheels…
Waxaan sii wadeynaa aqbalida macaamiisha cusub! Haddii aad jeceshahay inaad isqorto, fadlan sidaas samee halkan. Cunnooyinka waxaa lagu heli karaa waqti-gaaban iyo waqti-dhow waxaanan ka shaqeyneynaa sidii aan u hubin lahayn in la gaarsiiyo kuwa halista ugu jira inta lagu jiro cudurkan faafa iyada oo aan loo eegin awoodda aad u leedahay bixinta. Fadlan ogow haddii aad bixin karto kharashka cuntada, waxaad caawinaysaa qof aan awoodin.
Waxaad gacan ka geysan kartaa taageeridda dadaalkeenna si aan isugu diyaarinno
Waxaad ku deeqi kartaa halkan. Waxaan kordhinay wax soosaarka cuntada jikadayada waxaanan ka shaqeyneynaa inaan hubino in qof walba oo u baahan cunto waqtigan uu heli karo. Waxaan sidoo kale kharash gareeynaa lacag deg-deg ah si aan ugu diyaarinno goobaha aan ku gaarsiino alaabada nadaafadda. Wax kasta oo aad siin karto waxay taageertaa dadaalkaas.
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan ka hortagga faafidda cudurka iyo cusbooneysiinta ku saabsan coronavirus / COVID-19, booqo websaydhada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.